Nepal Auto | किन लोकप्रिय छन् २०० सीसीका यी बाइक ? यस्ता छन् ५ कारण
किन लोकप्रिय छन् २०० सीसीका यी बाइक ? यस्ता छन् ५ कारण 21 Ashwin, 2075
पछिल्लो समयमा २०० सीसीका बाइक अन्य देशमा मात्र होइन, नेपालमा समेत लोकप्रिय छन् । विभिन्न कम्पनीले यस्ता बाइक उपलब्ध गराएका छन् । बाइक प्रेमीहरु यी मोडलका बाइकमा निकै आकर्षित हुने हुँदा कम्पनीहरु पनि यसमा नयाँ नयाँ विकल्पहरु पेश गरिरहेका हुन्छन् ।
यी कारणले गर्दा यी मोडलका बाइक विशेष बनेका छन् :
१. २०० सीसीको बाइकको निकै चर्चा हुने गरेको छ । कम्पनीहरुले सो सेगमेन्टका बाइकलाई ग्ल्यामरस लुक्स समेत प्रदान गरेका छन् । नयाँ ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्नको लागि यी बाइकको रङमा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ । यसको लुक्सले गर्दा पनि ग्राहकहरु आकर्षित भएका छन् ।
२. पावरफुल इन्जिन मन पराउनेहरु अक्सर बाइकको माइलेजमा ध्यान दिन्छन् । २०० सीसीको बाइक युवा वर्गहरुका बीचमा लोकप्रिय सेगमेन्टमा पर्छ । नेपाल लगायत भारतमा पनि २०० सीसीको बाइकहरुले सामान्यतः ४५ किलोमिटर प्रति लिटरको माइलेज दिने गरेको पाइन्छ ।
३. यी बाइकमा २३ बीएचपी सम्मको पावर हुन्छ जसलाई कम भन्न मिल्दैन । यही कारण यो सेगमेन्ट, परफर्मेन्सको लागि पनि राम्रो मानिन्छ ।
४. लामो यात्राको लागि पनि यी बाइकहरु राम्रो विकल्प हुन सक्छन् । दिनमा १०० किलोमिटर बाइक चढ्ने राइडरहरुको लागि यसमा थकान पनि महशुस हुँदैन । आरामदायक सवारी बनाउनको लागि कम्पनीहरुले यी सेगमेन्टका बाइकहरुमा विशेष ध्यान दिएका छन् ।
५. सुरक्षाको लागि यिनमा निकै ध्यान दिइएको छ । चौडा टायरको कारण यी सेगमेन्टका बाइक निकै भरोसायोग्य छन् । यसमा अचानक ब्रेक लगाउँदा चिप्लने डर पनि हुँदैन । यसमा प्रयोग हुने इन्जिन पनि नत धेरै भारी नत हल्का नै हुन्छ । यही कारण बाइकमा सन्तुलन पनि कायम भइरहेको हुन्छ ।
नेपालमा हिरो एक्सट्रिम २००आर, टीभीएस अपाचे आरटीआर २००, बजाज पल्सर एनएस २०० र केटीएम ड्युक २०० जस्ता बाइक यो सेगमेन्टमा निकै प्रचलित छन् ।
होण्डाको दशैं–तिहारमा ह्वील अफ फर्च्युन–टू अफर
काठमाडौं – होण्डा मोटरसाइकल तथा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी...
अर्काको नाममा ट्रायल दिने नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ
काठमाडौँ — महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले स्वयम्भू ट्रायल सेन्टरमा नक्कली परी...
पानीजहाज भर्सेस रेल
यातायातसँग जोडिएका दुई विषयले यसपाली देशभर हंगमा मच्यायो । चिया पसलदेखि साइबरसम्...